China IP67 ridao nitarika mpanamboatra hazavana hazavana | Huayuemei
zavatra Tady LED Curtain tsy misy rano
famaritana 277.2 * 16.8 * 1.6mm
Haben'ny LED SMD3030
CRI 80+, azo namboarina
Temperture miloko 2800-12000K (namboarina)
Naoty IP IP67
Hijery Angle 160 °
fahefana 3.6w / pcs
Jiro lattice LED (ambain-LED, ravina volotsangana LED); Ny LATTICE LED Matrix Lighting System no vahaolana manazava be indrindra sy azo ampiharina ho an'ny kabinetra fanaovana sonia anatiny sy ivelany ary hazavana amin'ny faritra midadasika.
Ny famolavolana vaovao an'ny rafitra LATTICE dia misy horonan-taratasy mora apetraka maivana, izay ahafahan'ny mponina mora jiro milanja tonga lafatra ao anatin'ny minitra vitsy ho an'ny jiro backlit fanamiana.
Ity hazavana lattice LED ity izay mampiasa chip avo lenta avo lenta misy alàlan'ny masolanty alohan'ny farany dia mamela ny halaliny farafahakeliny, mamoaka hazavana fanamiana, tsy misy pentina hita eo amin'ny mari-pamantarana;
Fitaovana hazavana LED ho an'ny boaty maivana mampiasa modely jiro tokana - tokana ho an'ny lalimoara fanaovana jiro, tabilao fanaovana dokambarotra, tontonana fampirantiana ary karazan-jiro jiro miandany amina sisiny tokana;
Module backlit lattice miaraka amin'ny famirapiratana tena tsara amin'ny fanjifana herinaratra ambany, mety amin'ny rindrina backlit na boaty jiro tokana tarehy miverina kitapo jiro;
Ny valin-kazo tara-pahazavana LED miaraka amina famolavolana ny rafitra lattice dia tonga amin'ny fametrahana maivana sy mora entina mamonjy asa;
Fampivoarana ny jiro LED ho an'ny boaty maivana miaraka amin'ny kinova latina vaovao sy nohatsaraina, miaraka amin'ny valin'ny jiro azo antoka sy azo vinavinaina, nanampy fahatokisana, faharetana ary teknolojia tsy miovaova ankehitriny.
Tombony sy serivisy
1. Izy io dia takelaka LED Curtain tsy misy rano. Mety amin'ny boaty hazavana ivelany.
2.Adopt ny famolavolana tsindrona feno, ny kilasy tsy misy rano dia mety hahatratra IP67.
3. Mila fitaovana vitsivitsy ary tsy manam-pahaizana, ny LED Curtain tsy tantera-drano dia mety ho mora tohina ary haingo amin'ny habe na endrika rehetra
4. Jiro fanamiana, fisorohana ireo toerana mafana.
5. Afaka nanao araka ny fangatahanao izahay mba hanao vahaolana tsara indrindra ho anao. \_
Serivisy 6.OEM & ODM.
7. Warranty dia 3 taona.
8. Manome ny mpanjifanay fitaovana ara-tontolo iainana sy vokatra izahay.
Izy io dia mihatra amin'ny dokam-barotra fahazavana boaty & manitatra celling, Safidy mety amin'ny Advertising Light Boxs / Display Sign Board Backlighting… mihatra koa amin'ny fivarotana rojo, hotely, toeram-pivarotana, metro, seranam-piaramanidina, gara sns. ,Boaty maivana fanaovana doka, Takelaka takelaka misy jiro ao anatiny, Faritra fisehoana famantarana lehibe, Takelaka tokana sy avo roa heny, Boaty jiro afisy lehibe
Teo aloha: RGB 3030 Curtain LED Strip
Manaraka: 3030 lattice led strip
tariby mandeha amin'ny tadin'ny hazavana
RGB 3030 Curtain LED Strip
Ny tohatra IP65 dia nitondra hazavana nesorina
matrix nitarika backlit tarika strip